Dawladda Soomaaliya oo hadalkii Dawlada Ingiriiska jawaab cad ka bixisay… | Salaan Media
Dawladda Soomaaliya oo hadalkii Dawlada Ingiriiska jawaab cad ka bixisay…
Axad, Abriil 07, 2013 (SM) — Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabaysay digniin ay dowladda Ingiriisku ku sheegtay in Muqdisho ay ka dhici karaan falal argagaxiso ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inaysan jirin hadda khatar muuqata oo ka jirta Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya, Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi ayaa sheegay in hay’adaha ammaanka dowladda aysan soo sheegin wax khatar ah oo kusoo wajahan Muqdisho ama ka jirta, isagoo xusay inay baaritaan dheeraad ah ku sameynayaan digniinta ay dowladda Britain soo saartay.
“Hay’adaha ammaanka ee dowladdu ma soo sheegin wax khatar ah oo ka jirta Muqdisho, dowladda Britain waa dowlad weyn xaq ayayna u leedahay inay shacabkeeda uga digto meel walba oo ay khatar u aragto,” ayuu yiri Ciil-mooge Xirsi.
Sidoo kale, wasiirku wuxuu sheegay in ammaanka Muqdisho uu haatan si aad ah uga wanaagsan yahay sidii hore, ayna baaritaanno dheeraad ah ku sameyn doonaan khatarha laga digayo.
“Muqdisho ammaan buuxa ayaa ka jira,” ayuu wasiirku si kooban u yiri, mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo uu intaas raaciyay, balse magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay qaraxyo loo adeegsaday gaadiid miineysan iyo rag walxaha qarxa lagu xiray, kuwaasoo ay waxyeello xooggan kasoo gaartay dad shacab ah iyo ciidamada dowladda.
Warbixin ay soo saartay Britain Sabtidii shalay ayay ku sheegtay in laga yaabo in Al-shabaab iyo kooxo dowladda kasoo horjeeda ay weerarro argagaxiso ka fuliyaan Muqdisho, kuwaasoo ay sheegtay inay heer gabo-gabo ah marayaan.
Tan iyo markii ay Al-shabaab ka baxday Muqdisho; Ogost 2011, waxaa ka dhacayay caasimadda Soomaaliya qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo xubno ka tirsan Al-shabaab ay fulinayeen, inkastoo dowladdu ay dadaal ugu jiro sidii ay ku xaqiijin lahayd ammaanka guud ee Muqdisho.
Xukuumadda Britain ayaa bishii hore uga digtay muwaadiniinteeda inay ku tagaan safarro Somaliland, halkaasoo ay sheegtay inay ka jiraan khatarro dhinaca ammaanka ah, iyadoo xukuumadda Somaliland ay sheegtay inay jirin wax khatar ah oo ka jira Somaliland.